သစ္စာတရားများစုဝေးရာ.....: ဆူနာမီဆရာတော်ထံသို့ လျှောက်ထားလွှာ…
အသိဉာဏ်ဆိုသည်မှာ... အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုး... အမှားအမှန်များကို ကောင်းစွာ ဝေဖန် ပိုင်းခြား ဆင်ခြင် သိမြင်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်.....
တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား။ ပထမဦးဆုံး လျှောက်ထားလိုသည်မှာ တပည့်တော် လျှောက်ထားသမျှ အားလုံးသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင် လုံးဝမပါဘဲ သာသနာရေး တရားဓမ္မရေး သက်သက်ကိုသာလျှင် ဦးတည်ပါကြောင်းပါဘုရား။ တပည့်တော်အနေနဲ့ အရှင်ဘုရားကို မြင်လဲ မမြင်ဘူးပါသောကြောင့် ရဟန်းတစ်ပါးအနေနှင့် ကံသုံးပါးဖြင့် ပြစ်မှားမိသည်ရှိပါသော် ဦးနှိမ်ညွတ်ကျိုး မာန်ကိုနှိမ့်၍ ရှိခိုးတောင်းပန်အပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား။
အရှင်ဘုရားနှင့်ဆွေးနွေးပွဲကို နားထောင်ပြီးသောအခါ ပထမဦးဆုံးသနားမိတာကတော့ အရှင်ဘုရားရဲ့ ပစ္စည်းလေးပါး ဒကာ ဒကာမများကိုပါပဲဘုရား။ အရှင်ဘုရားဟောသမျှ တရားစစ်ထင်မှတ်ပြီး ယုံကြည်မှုမှား အယူမှားခြင်းဖြင့် သံသရာတလျှောက် ဒုက္ခများစွာဖြင့် မပေါ်သောမြှပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်မှာကို မြင်ယောင်မိလို့ပါဘုရား။
တပည့်တော်ဘဝင်မကျဆုံးကတော့ တရားရပြီးလျှင်၊ ဒါမှမဟုတ် အရှင်ဘုရားတရားနည်းနှင့် ကောင်းစွာအားထုတ်ပြီးသူ တယောက်အနေနှင့် ဝိနည်းသီလကို မလိုက်နာခြင်းသည် အပြစ်မဟုတ်ပါဟု ထင်မြင်ခြင်းကိုပါပဲဘုရား။ တဦးတယောက်၊ စည်းကမ်းချက်၊ သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လို့ ဆုပ်ကိုင်ထားစရာမလိုဘဲ စိတ်အစွဲမပါဘဲ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက အပြစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုခြင်းသည် တနည်းအားဖြင့် သောတာပန်-ကြက်သတ်နိုင်သလိုမျိုး၊ အနာဂါမ်- ညစာစားသလိုမျိုး၊ရဟန္တာ-ဝိကာလဘောဇနာ မရှောင်တာမျိုးပါပဲဘုရား။
သောတာပန်သည် ငါးပါးသီလ၊ သကဒါဂါမ်သည် ရှစ်ပါးသီလ၊ အနာဂါမ်သည် ဆယ်ပါးသီလကို အသက်ထက်ဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားပါတယ်ဘုရား။ ဝိနည်းသီလကို ထိန်းချုပ်စရာမလိုဘဲ ကံသုံးပါးစလုံးနှင့် အလိုအလျောက် အထူးလုံခြုံသွားပါတယ်ဘုရား။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှလဲ မဖောက်ဖျက်တော့ပါဘူး အရှင်ဘုရား။ ဝိနည်းသီလ မလုံသူတစ်ဦးကိုလည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အရိယာတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်၍မရနိုင်ပါဘူးဘုရား။
နောက်ထပ်စိတ်မချမ်းမြေ့စေတာကတော့ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာကို လူအများနားလည်သလို မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ အရှင်ဘုရားနားလည်သလို သတ်မှတ်ခြင်းပါပဲဘုရား။ ရဟန္တာဟူသည် လူဝတ်နှင့်ဖြစ်ပါက ရဟန်းဘောင်သို့ ချက်ချင်းမကူးပြောင်းလျှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံရမည်ဆိုသည်ကို အရှင်ဘုရား လက်မခံခြင်းသည် အဆိုးဆုံးပါပဲဘုရား။ ယူဆချက်၊သတ်မှတ်ချက်ကို ဆုပ်ကိုင်စရာမလိုပါဘူး ဟူသော အရှင်ဘုရား၏ ပုံသေနည်းသည် မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာနှင့် လားလားမျှမတူ၊ အလွန်တရာဆန့်ကျင်လျက် ရှိနေပါတယ်ဘုရား။
နောက်ထပ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ စိတ်ကြီးဝင်ပြီး ဆူနာမီတရားရယ်လို့ (မဟာစည်ဆရာတော်၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကဲ့သို့) တချိန်ချိန်မှာ လူအများလက်ခံလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေခြင်းရယ်ပါ။ ဘုရားဟောပါဋ္ဌိတော်များ၊အဋ္ဌကထာများကို မမှန်ပါဟု ယူဆနေသူ၊ လက်မခံသူဖြစ်နေသော အရှင်ဘုရား၏ တရားးများကို ဘုရားဟော ပါဋ္ဌိတော်၊ အဋ္ဌကထာများနှင့် ကိုက်ညီလှသော ဆရာတော်ကြီးများ၏ တရားများနှင့်တန်းတူသဘောထားနေခြင်းသည် မသင့်မြတ် မဆီလျော်လှပါဘူး ဘုရား။
ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုသည်မှာလည်း မြတ်ဘုရား၏ နှုတ်တော်မှမြွက်ဆှို ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များကို စာပေအက္ခရာ တင်ခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓစာပေကို ပစ်ပယ်ခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရားအလိုကျ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရား။ မြတ်စွာဘုရား၏သားတော်၊ သံဃာတော်အစစ်အမှန်ဟူသည် ပရိယတ္တိစာပေကို တတ်ကျွမ်းမှသာလျှင် မြတ်ဘုရား၏ သာသနာကို ထိန်းသ်ိမ်းစောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ပါတယ်ဘုရား။ ပရိယတ္တိစာပေကို အခြေခံလျက် ပဋိပတ္တိအကျင့်မြတ်ကို မြဲမြံစွာ ကျင့်သုံးနိုင်ပါလျှင် ပဋိဝေဓဟူသော ပန်းတိုင်ကို မလွဲမသွေ ဆိုက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် အရှင်ဘုရား။
<ပိဋကတ်ထောင်သူ၊ အကျင့်မြတ်အကျင့်မှန် ကျင့်နေသူများကို ပရမတ်ကြောင်သူဟူသော စကားရပ်ဖြင့် သာသနာပြုသူအချင်းချင်း စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ခြင်းသည် မိမိတို့၏ အဇ္ဈတ္တကို ဖော်ပြရာရောက်နေပါသဖြင့် အထူးဆင်ခြင်စေလိုပါသည်ဘုရား။>>
နောက်တခုအဆိုးဝါးဆုံးကတော့ တရားးအမှားများ ဟောကြားနေခြင်းပါပဲ အရှင်ဘုရား။ ရိုးရိုးစကား အမှားကို စကားနှင့်ပြန်ပြင်လို့ရပေမဲ့၊ တရားအမှားကိုတော့ ဟောချင်သလို ဟောလို့မရပါဘူး။ အမှန်တကယ် တရားရသွားသူ ဆိုသည်မှာ-မိမိ၏ အသိဥာဏ်အတွင်း ဖျက်ပစ်၍ မရလောက်အောင် သိသွားခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင့် မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာမဆို မည်သူ့ကိုပဲ ဟောဟော အမှန်တရားက တခုတည်းပဲ ဖြစ်ရမှာပါ အရှင်ဘုရား။ ပရိသတ်၏ အသိဥာဏ် အနိမ့်အမြင့်ကို လိုက်ပြီး၊ တရားအနုအရင့် ဟောပြောနိုင်ပါသော်လည်း၊ တရားအကြောင်းအရာ တခုတည်းကို အမျိုးမျိုးမှားယွင်းပြီး ဟောကြားလို့ မရနိုင်ပါဘူး အရှင်ဘုရား။ မိမိလွတ်လပ်ခွင့်ပါဟု ဆိုကာ ထင်သလိုဟောကြား၍ မရပါဘူးအရှင်ဘုရား။
နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော အသင်္ခတအငြိမ်းဓာတ်ကို ရယူလိုသူ သူတော်ကောင်းတစ်ဦးတွင် ဒါနနှင့်ပျော်နိုင်သော သဒ္ဓါ၊ ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲမြံသော သီလ၊ အရာရာကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သော စာဂ၊ တရားဆွေးနွေးခြင်းဟူသော သုတ၊ သဘောနှင့် လက္ခဏာကို ဆင်ခြင်နိုင်သော ပညာ၊ မကောင်းမှုကို ရှက်ခြင်းဟူသောဟိရီိ၊ သံသရာဘေးကို ကြောက်ခြင်းဟူသော သြတ္တပ္ပ စသည့် သူတော်ဥစ္စာများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရန် လိုအပ်လှပါသည် အရှင်ဘုရား။
စားစရာမြင်လို့ စားစိတ်ပေါ်လာသည်ဆိုပါက မျက်မမြင်သူများအတွက် စဉ်းစားစရာဖြစ်လို့နေပါတယ် အရှင်ဘုရား။ စိတ်ဟူသည် သိတတ်တဲ့သဘောတခုတည်းကိုပဲ ပြုလုပ်ပေးတာပါအရှင်ဘုရား။ အာရုံနှင့်ဒွါရတိုက်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်သာ စားစိတ်ပေါ်လာရခြင်းပါ အရှင်ဘုရား။ ပညတ်အထည်ခန္ဓာပေါ် မူတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘောခန္ဓာငါးပါး၏ မမြဲမှု၊ ဆင်းရဲမှု၊ အစိုးမရမှုဟူသော ဒုက္ခသစ္စာကို သိပြီး၊ ယင်းပေါ်အခြေခံလျက် ပေါ်ပေါက်လာသော သမုဒယသစ္စာကို မဂ္ဂသစ္စာဖြင့် ပွားများ ပယ်သတ်နိုင်မှသာလျှင် နိရောဓသစ္စာကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပါ အရှင်ဘုရား။
အနိမ့်ဆုံး သောတာပန် အရိယာဟူသည် ဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိစိကိစ္ဆာနှစ်ပါး ကင်းစင်သွားရပါတယ်အရှင်ဘုရား။ ဒိဋ္ဌိအစွဲပြုတ်ခြင်းနှင့် အတူ ယုံမှားခြင်း ဝိစိကိစ္ဆာကင်းစင်မှသာလျှင် အရိယာဟု သတ်မှတ်၍ ရပါတယ် အရှင်ဘုရား။ သုတ္တန်နည်း အရ ဘုရား၊ တရား၊သံဃာ၌ယုံမှားခြင်း၊ သိက္ခာ၌ယုံမှားခြင်း၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ယုံမှားခြင်း၊ သံသရာ၏ ရှေ့အစွန်း၊ အနောက်အစွန်း၊ အစွန်းနှစ်ပါးစလုံး၌ ယုံမှားခြင်း စသည်တို့ ကင်းစင်ရပါတယ် အရှင်ဘုရား။
မည်သည့်တရားနည်းမဆို သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမြင်ရှိမှသာလျှင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလနှင့် သမာဓိမရှိပါလျှင်လည်း မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့် မပြည့်စုံပါသောကြောင့် မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရား။ သီလတရားနှင့်ပြည့်စုံမှ စိတ်စင်ကြယ်၊ စိတ်ကြည်လင်ခြင်းတည်း ဟူသော သမာဓိဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုမှတဆင့် ပညာဥာဏ်နှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းဟူသော ပညာမဂ္ဂင်ကို ရရှိမှာပါ အရှင်ဘုရား။ ပညာဥာဏ်ကြီးမား၍ သီလနှင့်သမာဓိ မထူထောင်ဘဲ ပညာမဂ္ဂင်ကို ဦးဆုံးပွားများနိုင်မည်ဆိုပါကလဲ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် သမ္မာသင်္ကပ္ပ တည်းဟူသော ပညာမဂ္ဂင်ပြည့်စုံသွားပါက သီလနှင့် သမာဓိ အလိုအလျောက် မဖောက်မပြားဘဲ အထူးလုံခြုံ စင်ကြယ်သွားရပါမယ် အရှင်ဘုရား။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်တောင်းပန်ချင်မိတာကတော့ အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားသော တရားအမှားများကို အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဖော်ပြခြင်း၊ အယူမှား ဝါဒမှားနိုင်သော ဓာတ်ပုံများတင်ခြင်း၊ အပြစ်ကင်းစင်မှုမရှိသော တရားများကို ဟောပြောပြသခြင်း၊ ရိုးသားမှုရှိသော၊ ဗဟုသုတအားနည်းပြီး မသိနားမလည်သော လူအများကို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆန့်ကျင်စွာ ဆေးကုသခြင်း၊ နတ်ပူးဝင်ခြင်း၊ သရဏဂုံ ပျက်ပြားစေသော ဘိုးတော် မယ်တော်နတ်များကို ပသခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ခြင်းအား ရပ်တန့်စေချင်ပါသည် အရှင်ဘုရား။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရိပ်သာဝင်ကြသော ပရိသတ်အင်အားကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ငါ့တရားသာ အမှန်ဟူသော အစွဲကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တရားဟောခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ဂရုမစိုက်ခြင်း၊ လုပ်ချင်တာကို လွတ်လပ်စွာလုပ်မည်ဟူသော တလွဲမာနကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းများအား လွှတ်ချပေးပါရန် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား။
အယူမှား အလွဲမှားခြင်းဟူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့် သံသရာတလျှောက် မပေါ်သော မြှပ်ခြင်းဖြင့် နစ်မြှပ်သွားနိုင်သော ဝေနေယျ အပေါင်းကို ငဲ့ညှာထောက်ထားသောအားဖြင့် “ဧကဿ စရိတံ သေယျော” (တစ်ယောက်ထည်း နေနိုင်ခြင်းသည် အမြတ်ဆုံး နေထိုင်ခြင်း) ဟူသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဆုံးမစကားအတိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့် အရှင်ဘုရားအတွက်သာမက အရှင်ဘုရား၏ တပည့်ဒကာ၊ ဒကာမများအတွက်ပါ အကျိုးရှိနိုင်ပါကြောင်း အကြံပြုရေးသား လျှောက်ထားလိုက်ပါသည် အရှင်ဘုရား။
အရှင်ဘုရား ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိခန္ဓာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ။
ထက်စုနှင်းဆီ (ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်)
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 4:41 PM
ဆူနာမီ ဆရာတော် တရားတွေ နာကြားပြီး ထေရ၀ါဒနဲ့ မညီတာတွေ ထုတ်ဖေါ်ပေးနေကြတာ အတော်များလာပြီပဲ...
ဒကာ ဒကာမများ သာသနာမျက်နှာကြည့်ပြီး မကြောက်မရွံ့...
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာနဲ့ ဆရာတော်ကို ရေးကြ လျှောက်ကြတာ တွေ့ရတော့...
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါတဲ့ သာသနာပြုမှုတွေ လုပ်ဆောင်ကြပါ...
ထေရ၀ါဒ မြန်နိုးသူများ ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်း အားပေးပါတယ်...
ဆရာတော်ဘုရား ထေရ၀ါဒသာသနာကို တည်ထောင်နိုင်ပါစေ...
အမှားဟောတဲ့တရားတွေကို မှားရင်မှားတယ်၊ဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လျှောက်ထား တာဟာ သာသနာပြုခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ
ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့အတွက်လဲ ၀မ်းသာစရာကောင်း လှပါတယ်။
အားပေးစကား ချီးမြှောက်တော်မူသော အရှင်နှစ်ပါးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား..
ဆူနာမီဆရာတော်ကသာ တပည့်တော် တောင်းပန်လျှောက်ထားချက်ကို လိုက်လျောမယ်ဆိုရင် တပည့်တော် ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်. အရှင်ဘုရားတို့...
ဒီဆရာတော်ကို လျှောက်ရဒါ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ သူက ၀တ်နည်းဆိုဒါလဲ ပညတ်၊ ဘုရားဟောထားဒါ အကုန်လုံး ပညတ်၊ ရှိရှိသမျှ အကုန်လုံးကို ပညတ် လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ သူနားလည်ထားတဲ့ ပညတ်ကလဲ ဘာမှ မဟုတ်သလို ဘာမှကို အရေးမပါဘူးပေါ့။ သူက သူသိတဲ့အသိကိုမှ အမှန်လို့ထင်နေဒါကိုး။ ခက်ဒါက သူ့အသိဆိုဒါကလဲ သူကိုယ်တိုင် ဘာမှန်းကို မသိဒါ။ ရှင်းကို မပြနိုင်ဒါ။ ဆရာတော် သိတဲ့ တရားက ဘာလဲဆိုတော့လဲ မသိတဲ့လူကို ရှင်းပြလို့မရဘူးတဲ့။ ရှင်းပြဒါကိုက ပညတ်တဲ့။ ခက်တော့ဒါပါဘဲ။ ဘုရားဟောကို လိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့လူတွေ အားလုံးကို သူက ရှေးထုံး အတိုင်းကျင့်သူတွေပေါ့။ အဲလိုကျင့်လျှင် ဆက်တက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူပြောသလိုဒါ ကျင့်လိုက်ရင်တော့ လုံးဝ တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်ပေါ့။ ဒါကို မှမှန်တယ်လို့ ဘယ်လို confirm လုပ်မလဲဆိုတော့ သူ့ယောဂီတွေဆီက ပြန်ကြားရတယ်ပေါ့။ ဘာကိုမှ အသေအချာ မရှိ၊ ဟောချင်ဒါဟော၊ မှားဒါလဲပါချင်ပါမယ်၊ နောင်ခါလာနောင်ဈေး၊ ဦးဇင်းကတော့ အခုပြောဒါလဲမမှတ်ထားဘူး ပညတ်ဘဲ အဲလို ကိုယ်ဟောတဲ့တရား ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မှားမှန်း မသိ မှန်မှန်း မသိ။ တရားဟော ကျင့်တယ်ဆိုဒါကလဲ ပါသေးတယ်။ တရားဟောဒါကို စစ်တုရင်ထိုးသလိုမျိုး ထိုင်ကျင့်လို့ရတယ်များမှတ်နေလားမသိပါဘူး။ မှားတဲ့အခါလဲ မှားပေမပေါ့ ဆိုပြီး စမ်းဟောနေတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။ ကတုံးတုန်းပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ဒါနဲ့ သူ့ဟာသူ စွန့်ရဲတယ်ဘဲပြောနေဒါဘဲ။ ကိုယ်ရင် ဘ၀ကတည်းက ၀တ်လာတဲ့ ရဟန်းတွေက အားမနာတော့ဘူး။ သူပြောချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ဆိုဒါကလဲ ရှင်းပြလို့မရဘူး။ နောက်ဆုံးတော့လဲ သူ သိတဲ့ အသိက ဆိုဒါက လွဲလို့ ကျန်ဒါရှိရှိသမျှ ပညတ်၊ ရှိရှိသမျှ ပညတ်အဲလို ဟောသလိုဖြစ်နေပြီ။
February 21, 2010 at 1:53 AM
ဆူနာမီဆရာတော်မှ ရှင်းပြချက်များ ဒေါင်းလုပ်ပြု နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
ရိုရိုသေသေလေးနဲ့ ထိထိမိမိလျောက်ထားပုံလေးကို သာဓုခေါ်သွားပါတယ်ဗျာ..။ ကျားကိုက်ပါတယ်ဆိုမှ အပေါက်လေးနဲ့လားလို့ မေးနေသလိုပါပဲ.. အမှားကြီးကို အမှားမှန်းသိရက်နဲ့ မှန်တယ်မှန်တယ် ထင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သူ့လမ်းနဲ့သူပေါ့အစ်မရေ..။ အမှားကိုအမှားအတိုင်း ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ လူအများနားလည်လက်ခံအောင် ရေးသားပေးတဲ့အတွက် သာဓုပါအစ်မရေ...။ ဆက်လက်ရေးသား ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ..။
မထက်စုနှင်းဆီ.. စာကြောင်းတိုင်းမှာ စေတနာတွေ ပါနေတယ်ဆိုတာ ဖတ်ရင်းနားလည်မိတယ်။ အဓမ္မကို ဓမ္မလို့ဟောပြောမှုကို သာသနာမြတ်နိုးသူပီပီ လိမ်လိမ်မာမာ ညင်ညင်သာသာ လျှောက်ထားတာ သာဓုခေါ်စရာပါ။ဆူနာမီဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်
ပြီး ရေးနေ ပြောနေ လျှောက်ထားနေကြတာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုမဖက် ဓမ္မသန့်စင်ရေး သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုတောင်းစကားပြောပေးတဲ့ မောင်ကောင်းနဲ့ အားပေးစကားချီးမြှင့်တဲ့ ဦးဇင်းဘုရားတို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှန်တရားကို သိမြင်တဲ့အတိုင်း ရေးပေးသော အမည်မသိနဲ့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မသိသေးသော၊ ဘယ်တော့အခါမှ သိမည်မသိသော အမည်မသိတို့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှန်ဖြစ်စေချင်သောစေတနာနဲ့ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ. လူတိုင်းသဘောပေါက်လက်ခံရင် ကျေနပ်လှပါပြီ။
Vipassana Meditation said...
ဆူနာမီဆရာတော်မှ ပြန်လည်ရှင်းပြမှု တရား(၉)ပုဒ်နားဆင်ခြင်းဖြင့် အမှား အမှန် ကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်ပါစေ။
အောက်ပါ လင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။
မထက် ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာပြုနိုင်ပါစေ ..
တော်တော် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ၊ ဦးဇင်းတို့ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံးဝ မပါဘဲ ဓမ္မကိုသာ ရှေးရှု့နေကြတာမို့ သံဃာထု လူထုအားလုံးကိုယ်စား သာဓုခေါ် ၀မ်းသာရပါတယ်။ အားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူ သာသနာပြုပြီး သစ္စာတရားအမှန်သာ ထွန်းကားပြန့်ပွားနိုင်ပါစေ- -
အားပေးစကား ချီးမြှင့်ပေးသော ဦးဇင်းဘုရားကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဦးဇင်း ဆောင်းပါးက “ဧကဿ စရိတံ သေယျော” (တစ်ယောက်ထည်း နေနိုင်ခြင်းသည် အမြတ်ဆုံး နေထိုင်ခြင်း) ဆိုတဲ့ စာစုလေးကို သင့်တော်လို့ ယူသုံးထားပါတယ် ဘုရား။
သစ္စာရေ.. နားထောင်ပြီးပါပြီ. ဘာမှလဲ ထူးထူးခြားခြား မရှင်းပြထားပါဘူး. အရင်အတိုင်းပါပဲ. အမှားအမှန် ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့က သစ္စာတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ အတွက် အထူးလိုအပ်နေတာပါ။ အသိဥာဏ်နဲ့ သေချာစဉ်းစားပါနော်။ နောက်မကျသေးပါဘူး။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇွတ်မတိုးပါနဲ့။
တရား ၉ ပုဒ် ကို မြန်လှချည်လား နားထောင်တာ...
မနေ့က မှ ပေးတဲ့ဟာကို
တကယ်တော့သူလိုလူ ဒီလိုတွေးတာမဆန်းပါဘူး။ စာပေမှမဖတ်ဘူးတာ။မိလိန္ဒပဉှာ မှာအရှင်နာဂသေန ဖြေပြပြီးသားပါ။
မကျေနပ်သးရင် လယ်တီဆရာတော်ရဲ့ အနတ္တဒီပနီ ကျမ်းသစ် သစ္စာ(၂)ပါးခွဲပြခန်းမှာဖတ်။
သူပြောသလို အားလုံး ပညတ်ကြီးပဲဆိုရင် ဆူနာမီဆရာတော်ဆိုတာလဲ ပညတ်ပဲလေ ဘာလို့ယုံနေရမှာလဲဗျာ။
အားလုံးကို ပညတ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တော် ထောင်ကိုရော ပညတ်ပဲဆိုပြီး ဝင်နေပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
အားလုံးကို ပညတ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တော် သင်္ကန်းကိုရော ပညတ်ပဲဆိုပြီး ချွတ်နေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ (တန်လဲမတန်တော့ပါဘူးလေ)
အားလုံးကို ပညတ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တော် သပိတ်ကိုရော ပညတ်ပဲဆိုပြီး ပန်းကန်လေးနဲ့ဆွမ်းခံလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
အားလုံးကို ပညတ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တော် ဖိနပ်ကိုရော ပညတ်ပဲဆိုပြီး ဝေါကင်းရှူးနဲ့ နေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
ဆူနာမီရေ ပါရာဇိကကျပြီးရင် ငရဲကိုတန်းနေပြီနော်၊
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားဟော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်းကြီးကို ဖင်ခုထိုင်ထားတာကတော့ "ဟင်း။နော်"
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပြည့်တွေကတော့ အဇာတသတ် လက်သစ်တွေပေါ့လေ။ ဆရာတင်မှားလို့ သံသရာမှာခံကြရဦးမှာပဲ။
စကားပြောနဲနဲကြမ်းသွားရင် စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပြည့်တွေ အတွက် စိတ်ပူလွန်းလို့ပါ။
မှတ်ချက်။ အားလုံးကို ပညတ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တော် သင့်အတွက် "ငရဲ"ဆိုတဲ့ ပညတ် မှာအထူးခန်းတစ်ခန်း ကြိုမှာထားပေးတယ်။
သစ္စာရေ. အကုန်လုံးတော့ မနာဖြစ်ပါဘူး။ နာသလောက်က မထူးဘူးပြောတာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လဲ လုပ်ရသေးတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့်တရားနာတာ ကောင်းပါတယ် သစ္စာရယ်။
သိကြားမင်းရေ. ကံ-ကံ၏အကျိုးပဲပေါ့။ အကြောင်းကံကြောင့် အကျိုးကံက ပေးမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆူနာမီလှိုင်းဒဏ် ခံရမယ့် ဝေနေယျတွေအတွက်ပဲ စိတ်ပူမိတာပါ။ ကျောက်ဖျာတင်းလို့ပဲ လာလာ၊ လာတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးပါပဲ။
(သာသနာမှာ မှားတာကို မှားကြောင်း ထောက်ပြရဲသူ သိပ်ရှားလို့ ထောက်ပြသူအားလုံးကို ချီးကျူးဂုဏ်ယူမိပါတယ်။)
ဆူနာမီ ဆရာတော် ဘုရား ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြသောသူ ပညာရှင်တချို့နှင့် ဘုန်းဘုန်း အပေါင်း တို့ခင်ဗျား........ဆူနာမီဆရာတော်အား မေးမြန်းခဲ့ကြသော YES/NO မေးခွန်းလေး များ နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် မေးခွန်းပုစ္ဆာ( ၉ )အား အများသူငါ အမှားအမှန် သံသယ ရှင်းလင်း စွာ သိရှိနိုင်ရေး မေတ္တာရှေ့ထားကာ ဖြေကြားပေးပါရန် လေးမြတ်စွာ ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည် ဘုရား။
ဆူနာမီဆရာတော် ကိုတော့ တရားခံတစ်ဦးလို မေးချင်သလို မေးပြီး အတင်း အဖြေတောင်းတယ်...
မဖြေနိုင်တော့ မဟိန်းဟောက်ရုံ တမယ် ဒေါသထွက်ပြတယ်....
အမတို့ကျတော့ တကယ့်အဓိကကျတဲ့ မေးခွန်းလေး(၉)ကိုတောင် မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်း.....
အများအတွက် အမှား-အမှန်ဆိုတာ သဲကွဲသွားပြီပေါ့။။
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မစစ်ပဲ သူများစိတ်သာ စစ်ချင်နေတဲ့တသံသရာလုံးက အကျင့်တွေ ဖျောက်သင့်ပါဘီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်း အဲ့လို ရန်ညှိုးနဲ့စခဲ့တာက ဒေါသတွေနဲ့ မေးလိုက် မြန်းလိုက်နဲ့ဖြေရှင်း နေကြတာ ရှက်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ သူများဘာသာသိရင် ရှက်စရာ ကြီး ။ သူများဘာသာများ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖေးမကူညီ အားပေးလိုက်ကြတာ။ ဘယ်သူ ဘာကြီး ဖြစ်နေဘီ ဆိုတာထက် မိမိစိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘ စိတ် ဒေါသစိတ် မောဟစိတ် မာနစိတ် စသော ကိလေသာ စိတ်တွေ ကို အမြဲစစ်ပေးပါလို့ အကြံပြု ပါရစေ။ မိမိသင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ နည်းနဲ့ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် အမြန်ဆုံး အပါယ်တံခါးပိတ် နိဗ္ဗာန် တံခါးပွင့်အောင် လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သက်တမ်း တ၀က် မက ကျိုးနေပါဘီ။ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်သေမယ်ဆိုတာ မသိသေးခင်မှာ သူများ အတွက် အချိန်မကုန်ပဲ မိမိသာလျှင် အမြန်ဆုံး အသေ မဦးခင် ဥာဏ်ဦးကြပါစုိ့။ သူများစိတ်စစ်နေ ခြင်းအားဖြင့် အပါယ်သွားမဲ့ အလုပ် တွေ ရပ်တန့် ကြပါစို့ လို့ ဘုရားအကြိုက် တရားနဲ့ ပူဇော်ခြင်း အလုပ်သင့်ဆုံး အလုပ်ကို လုပ်ဖို့ စေတနာဖြင့် တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
တော်တော် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ၊ ရိုရိုသေသေလေးနဲ့ ထိထိမိမိလျောက်ထားပုံလေးကို သာဓုခေါ်သွားပါတယ်ဗျာ..။
အလကားနေရင်း..ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့ဗျာ...သေသွားရင် ရဟန္တာဟုတ်မဟုတ်...သိပါမည်။ဘုရားဟောတရားများကို..အားလုံးသိရန် နှင့် ထိုးထွင်းမြင်ရန်မှာ..........u all will know what I mean....
ပညတ်နဲ့ပရမတ်ကိုသေချာခွဲခြားပြတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်...
ဆူနာမီဆရာတော်အား ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏။ အဝိဇ္ဇပညတ်အသိမှ ဝိဇ္ဇာပညတ်အသိတင် ရပ်မနေပဲ ပရမတ်သစ္ဏာအသိထူးတိုင်အောင် သွားနိုင်ကြပါစေ...
ဘယ်သူ့မျက်နှာဆိုတာထက် သာသနာမျက်နှာ ထောက်ရမှာပါ။တပည့်တော်တို့ လက်ထက်ကျမှ သာသနာယို့ယွင်းရင် ရှက်ရမှာပါ။
(မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား)
ကိုးကွယ်ရာမှာ၊ ရွေးချယ်ပါ။ (အရှင်ဇဝန)
ရေးသားသမျှအားလုံးသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထိခိုက် စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲစေလိုသော စေတနာဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်.......
ဤမှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့် စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ကြပါစေ...
ယနေ့အချိန်အခါသည် သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေသူ၊ အယောင်ဆောင် ပူးသတ်နေသူ၊ တရားစစ်တရားမှန်များကို မသိမြင်နားမလည်သူ များပြားနေသောကာလ ဖြစ်နေပါသည်......
ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကို ဖျက်ဆီးနိုင်သူများမှာ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားများ မဟုတ်ပါ၊ အယောင်ဆောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာလျှင် သာသနာကို ဖျက်ဆီးမည့်သူများ ဖြစ်ပါသည်.....
Ultimate Gateway to Myanmar Vippassana Dhamma Talks, Dhamma MP3, Dhamma Ebooks, Dhamma Videos - (မဟာသုတကာရီ မဃဒေ၀ လင်္ကာသစ် ဆဌမပိုင်း၂၊ နိမိရာစစရိယခန်းအပိုဒ် ၅၀၇၊ စာမျက်နှာ ၄၀၆နှင့် ဓမ္မပဒတွင်ပါရှိသည့် သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ အလုံးစုံသောဒါနတို့တွင် ဓမ...
ပညာသုံးတန် စုံရမည် - *ပညာသုံးတန် အောင်ရမည် * (သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပြန်လာပြီးနောက် ဇာတိမြို့မှာ တစ်နှစ်ခွဲလောက် အနားယူပြီး။ ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ခွင့် ထပ်မံကြုံလာသဖြင...
ကျဆုံးလေသူအတွက် - ပြောရင်းဆိုရင်း ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲ တစ်နေရာမှာ ညီလေးကျဆုံးရလေပြီ... ညီလေးအတွက် ဖြစ်မဲ့ဘေးတွေ သိနေရက်နဲ့ အကိုကြီးတို့ မကာကွယ်လိုက်နိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ....
ဒုတိယဥပဒေ ဆုံးမ သြဝါဒ... - လဇ္ဇီပေသလ သိက္ခာကာမ သူတော်ကောင်းတို့ ကဲရဲ့ပြစ်တင် အစွပ်စွဲ မရှိရအောင် ဆင့်ဆိုဆုံးမ သြဝါဒပေးရန် (ဒုတိယဥပဒေ) သီလပိုင်ရှင်
ဘယ်သူလာပြီး ရှင်းပေးမှာလဲ...၃ ရုပ်သံ (ဒယ်အိုး ဆရာတော်) - ဒယ်အိုး ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ မိုးကုတ်ဓမ္မကထိက ဘယ်သူလာပြီး ရှင်းပေးမှာလဲ...၃ တရားနာပြီး တရားအတိုင်း ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ
Permaculture (13) - Permaculture System တှငျ ပါဝငျသော အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြား ====================================== အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြားသညျစနဈ၏စှမျးဆောငျရညျနှငျ့ကုနျထုတျစှမ...
သမထ နှင့် ဝိပဿနာ - *မေး ။ ။ သမထနှင့် ဝိပဿနာ ဘာကွာသလဲဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်မလား။* ဖြေ။ ။ သမထဆိုတာက စိတ်အေးချမ်းသွားဖို့အတွက် အားထုတ်တာ၊ အတွေးတွေရပ်သွားဖို့အတွက် အားထုတ်တာ၊ စိတ...
မာရ်နတ်၏ ပထမစစ်တပ် - “နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ” မာရ်နတ်ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် အဖျက်သမား၊ အဖျက်တရားဟူ၍ ဗုဒ္ဗဘာသာဝင်တို့ ချက်ခြင်း သိကြ၏။ မာရ်ဆိုသည်မှာ “မာရ”ဟူသော ပဠိမှ ဆင်...
hello world - hello world this blog is renew
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်ဝတဲ့ မြန်မာအတာကူး ဖြစ်ကြပါစေ - မြူးကြွတဲ့ပုလင်းသံ..ပျံ့လွင့် လို့နေ..ကူးပြောင်းစ..တန်ခူးလေမှာ… … ♫ ♪ ♫ ♪ တစ်ယော...က်တစ်ခွက်နဲ့ လှမ်းကာ.. ကစ်လိုက်ကြစဉ်… … ♫ ♪ ♫ ♪ မကြိုက်ဘူးပြောပြီး အန်ေ...
သံဝေဂ... - မအိုသေးခင် ပြင်ကြဆင်ကြ ရုပ်အလှ.. မနာသေးခင် မော်ကြကြွားကြ ဥစ္စာဓန... မသေသေးခင် ထောင်ကြလွှားကြ မာန်မာန.. သင်အိုသောအခါ သင့်ခန္ဓာ ရွတ်တွပျက်စီးအံ့.. သင်နာသောအခါ...
Dr. သီလာနန္ဒာဘိဝံသ (Rector) ၏ တရားစာအုပ်များ - ဆရာတော် Dr. သီလာနန္ဒာဘိဝံသ (Rector) ၏ တရားစာအုပ်များ (၅) အုပ် ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဆရာတော်ကြီးများ၏ သြဝါဒများ (13)
မြတ်စွာဘုရား၏ ဒေသနာ (2)